Oggolaanshaha Hore ee Caafimaadka Jirka - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
➔ Tilmaamaha Adeegsiga Caafimaadka iyo Qalliinka ee 2021
Qalabka caafimaadka iyo sahayda kale waxay u baahan yihiin oggolaansho hore si loo ogaado baahida caafimaad. Caymiska waxaa lagu go'aamiyaa shuruudaha qaran ama kuwa maxalliga ah ee ay sharraxeen Xarumaha Adeegyada Medicare iyo Adeegyada Caafimaadka (CMS). Haddii aysan jirin midna, CHPW waxay isticmaashaa Shuruudaha Caymiska Caafimaadka (eeg siyaasadaha hoose).
Qalabka caafimaadka waxaa lagu qeexaa sida soo socota:
Qalabka Caafimaadka Dajinta ah
Qalabka caafimaadka ee waara ee loo arko inuu yahay mid waara waa qalab u adkeysan kara adeegsiga soo noqnoqda, sida, nooca sheyga la kiraysto. Sahayda caafimaad ee dabeecadda lagu bixin karo, sida suufka ceshad la'aanta kaadida, suufka wan ee dhogorta, kateetarada, faashada faashadda, sharabaadada laastikada ah, wajiga qalliinka, go'yaasha, iyo boorsooyinka looma tixgaliyo inay yihiin kuwo "waara" macnaha qeexitaanka Waxaa jira waxyaabo kale oo, in kasta oo ay waarayaan dabeecadda, laga yaabo inay ku dhacaan qaybaha kale ee caymiska sida sahayda iyo suugaan-barashada iyo suuxdinta. Waxyaalaha jirka lagu qurxiyo iyo kuwa loo yaqaan 'Prosthetics' waxaa ka mid ah, xarigyo, addimo macaan iyo indho.
Qalabka caafimaadka waxaa lagu qeexaa inuu yahay qalab ugu horeyn ahaan iyo caadiyan loo isticmaalo ujeedooyin caafimaad guud ahaanna aan waxtar lahayn maqnaanshaha jirro ama dhaawac. Xaaladaha badankood, wax dukumiinti ah looma baahna si loo taageero in shay gaar ah oo qalab ah uu yahay mid caafimaad ahaan iyo in kale. Si kastaba ha noqotee, kiisaska qaarkood waxay u baahan doonaan dukumiintiyo ay ku jiri doonaan la-talinta ururada caafimaadka ee maxalliga ah iyo tas-hiilaadka iyo khabiirka ku takhasusay daaweynta jirka iyo dhaqan-celinta. Haddii qalabku ku cusub yahay suuqa, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan tahay, ka hor inta aanad raadin talo-bixin xirfad-yaqaan ah, si macluumaad looga helo alaab-qeybiyaha ama soo-saaraha oo sharraxaya nashqadda, ujeeddada, wax-ku-oolnimada iyo habka isticmaalka qalabka guriga iyo sidoo kale natiijooyinka wixii tijaabo ah ama daraasado caafimaad ah oo la qabtay.
Ka reeban: Amarka DME waxaa saxeexi kara bixiye aan ka ahayn dhakhtar xaaladaha qaarkood:
Maamulka dawada ama kormeerka (sida, baaritaanka gulukoosta dhiigga, kormeerka gulukooska ee joogtada ah, ama bambooyin insulin), ama faleebo guri
Qalabka neefsashada (sida, maaskaro CPAP ama tubbo)
Codsiyada DME inta xubintu kujirto xarun (SNF, Bukaan-jiifka Rehab, Daryeelka Degdega ah ee Muddada Dheer ama isbitaalka. Saxiix ayaa looga baahan doonaa xubnaha ku jira daryeelka xannaaneynta, guriga qaan-gaarka ah ee qaan-gaarka ah, ama daryeelka muddada-dheer.
Qaar ka mid ah qalabka caafimaad ee raagaya, daaweynta jirka iyo sahayda caafimaad ayaa u baahan oggolaansho hore. Hoos waxaa ku yaal tusaale waxyaabaha guud ee u baahan oggolaanshaha. Fadlan la soco in kani aanu ahayn liis dhammaystiran.
Kiciyeyaasha koritaanka lafaha
Qalabka cadaadiska laabta
Nafaqada Gaarka ah (21 iyo wixii ka weyn)
Bambooyin Dhex-dhexaad ah
Sariiraha cisbitaalka iyo agabyada ay ka kooban yihiin
Naafada / Gawaarida Naafada
Tixgelinta Gaarka ah
Dayactirku uma baahna qiimeyn waji ah oo uu la kulmayo dhaqtarka laakiin wuxuu u baahan yahay saxeex dhakhtar amarka
Codsi kasta oo loogu talagalay beddelka DME waa inay ku jiraan dokumentiyo hadda jira (3 bilood gudahood) qiimeyn fool-ka-fool ah oo ay sameeyeen dhakhtarka daaweynta iyo daaweeyaha, sida ku habboon, oo muujinaya baahida caafimaad ee aaladda xubinta.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Tilmaamaha Daryeelka Qalabka Caafimaadka ee Daa'in kara ayaa laga heli karaa siyaasaddan.